भोकले छट्पटिन थालेका नेपालीहरुको पेट निशेधाज्ञाले नै भरिदै! हर्नुस भिडियो… – PathivaraOnline
Home > भिडियो > भोकले छट्पटिन थालेका नेपालीहरुको पेट निशेधाज्ञाले नै भरिदै! हर्नुस भिडियो…
admin September 7, 2020 September 7, 2020 भिडियो, समाचार	0
काठमाडौं, २२ भदौ । कोरोना नियन्त्रणका नाममा मानिसहरुलाई घरभित्र थुनेर राख्नु भन्दा अर्को विकल्प नदेखेको सरकारले भोकले छट्पटिन थालेका नेपालीहरुलाई भने देख्न छोडेको छ । खान नपाएर कोही पनि नेपालीले मर्नु पर्ने छैन भन्ने प्रधानमन्त्रीले बारम्बार व्यक्त गर्ने अभिव्यक्तिलाई काठमाडौंको खुलामञ्चमा दाता र मनोकारी संघसंस्थाले जिस्काई रहेको भान हुन्छ ।
जे माग्यो त्यहि पुरा हुने यो कस्तो अचम्मको पाथिभरा मन्दिर, हेर्नुहोस् भिडियो !
सिन्धुपाल्चोककाे बाढी पहिरोमा परि बाबु छोरी नै नरहेपछि…